जगदीश्वरमा प्राण प्रतिष्ठासँगै महापुराण - विवेचना
जगदीश्वरमा प्राण प्रतिष्ठासँगै महापुराण
February 13, 2018 235 Views
जयपुर । बुद्धशान्ति गाउँपालिका-२ स्थित जयपुरमा रहेको जगदीश्वर शिव पाञ्चायन मन्दिरको अक्षय कोष स्थापनार्थ फागुन ६ गतेदेखि श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गरिने भएको छ ।
पुराण आयोजक समितिका संयोजक पुष्पराज न्यौपानेका अनुसार उक्त मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा फागुन ५ गते गरिनेछ । ६ गतेबाट सुरु महापुराण भने फागुन १२ गते समापन हुने न्यौपानेले जानकारी दिए । महापुराणमा पाँच हजार एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको दाताहरुको सहयोगलाई अक्षय कोषमा राखिने उनले बताए । न्यौपानेले भने, ‘करिब पाँच लाखको अक्षय कोषको स्थापना गर्ने हामीले सोच बनाएका छौं ।’
पुराण आयोजक समितिका सचिव रामचन्द्र पौडेलका अनुसार महापुराण सूचना प्रविधियुक्त हुनेछ । कथावाचकले विभिन्न धार्मिक तीर्थस्थलहरुको कुरा गर्दा त्यही तीर्थस्थलहरु सूचना प्रविधिका उपकरणबाट देखाइने पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले यो नौलो प्रयोग गर्ने सोच बनाएका छौं । सबै मान्छे पर्दामा देखाइएका तीर्थस्थलसम्म पुग्ने हैसियत राख्दैनन् । त्यसैले पर्दामा भए पनि देखाउने हाम्रो कोशिस हुनेछ ।’
स्थानीय खिना गौतमलाई सपनामा आफू अंकित शिलाको रुप र स्थान भगवतीले देखाइदिएका कारण उक्त स्थानमा मन्दिर बनाइएको पौडेलले बताए । सपनामा भनिएजस्तै मन्दिर निर्माणस्थलमा थुपारिएको ढुंगाभित्र शिला फेला परेपछि गाउँले मनिदर निर्माण गर्न जुटेका हुन् । उक्त शिला हाल गौतमले नै घरमा पुज्दै आएको पौडेलले बताए ।
उक्त मन्दिरका लागि स्व. पतिको सम्झनामा स्थानीय कृष्णकुमारी पौडेलले दुई कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराइदिएकी हुन् । गाउँलेहरुको व्यापक उत्साह र सहभागितामा उक्त स्थानमा जगदीश्वर शिव पाञ्चायन मन्दिर निर्माण भएको छ । दुई वर्षभित्रमा पाँच सय घरधुरी मन्दिरको सदस्य बनिसकेका छन् ।
महापुराणबाट करिब २० लाख रुपैयाँ दाताबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजक समितिका संयोजक न्यौपानेको भनाइ छ । पुराणमा ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने अनुमान उनले गरे । उक्त पुराणको प्रमुख वाचकमा पं. छन्दुराम भण्डारी र उपवाचकमा पं. होमनाथ खतिवडा रहनेछन् । महापुराणबाट उठ्ने रकमबाट अक्षयकोष स्थापनाका साथै मन्दिरको भूमि विस्तार, बृद्धबृद्धा भेटघाटस्थल र विविध कार्यमा उपयोगी सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
Previous अथक जिन्दगी
Next बिर्तामोडमा आज मिस नेपाल अडिसन